I-ZDYG-2087-01QX Isinxibelelanisi soxinaniso seSludge kwi-Intanethi
I-ZDYG-2087-01QX ye-TSS inzwa yokukhanya yokusasaza ukukhanya ngokusekwe kwindibaniselwano yokufunxwa kwe-infrared, ukukhanya kwe-infrared okukhutshwe ngumthombo wokukhanya emva kokusasazeka kobunzima kwisampulu.
I-ZDYG-2088-01QX Isenzi sensimbi seDijithali
I-ZDYG-2088-01QX yesixhobo sokusasaza ukukhanya kwendlela yokusasaza esekwe kwindibaniselwano yokufunxwa kwe-infrared, ukukhanya kwe-infrared okukhutshwe ngumthombo wokukhanya emva kokusasazeka kobunzima kwisampulu.
I-CLG-6059T kwi-Intanethi eseleyo kwiChlorine Analyzer
I-CLG-6059T intsalela ye-chlorine analyzer inokudibanisa ngokuthe ngqo intsalela yeklorine kunye nexabiso le-pH kumatshini uphela, kwaye ibeke embindini kwaye iyilawule kumboniso wepaneli yescreen sokubonisa; Inkqubo idibanisa umgangatho wamanzi kuhlalutyo lwe-Intanethi, ugcino lwedatha kunye nemisebenzi yokulinganisa. Ukuqokelelwa kwedatha eseleyo yomgangatho wamanzi kunye nohlalutyo zibonelela ngokulula kakhulu.
1. Inkqubo emanyanisiweyo iyakwazi ukubona i-pH, intsalela yeklorini kunye nobushushu;
2. 10-intshi umbala touch screen ukubonisa, kulula ukusebenza;
3. Ukuxhotyiswa ngee-electrode zedijithali, iplagi kunye nokusetyenziswa, ukufakwa okulula kunye nokugcinwa;
I-NHNG-3010 yoHlaziyo lweAmoniya yokuHlaziya
Uhlobo lwe-NHNG-3010 i-NH3-N Isazisi somatshini esizenzekelayo senziwe ngamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ye-ammonia (NH3-N) isixhobo sokujonga ngokuzenzekelayo, sesona sixhobo kuphela sehlabathi esisebenzisa itekhnoloji yokuhlalutya inaliti yokuhamba phambili ukufumanisa uhlalutyo lwe-ammonia online, kunye inokubeka iliso ngokuzenzekelayo i-NH3-N yawo nawaphi na amanzi kwixesha elide elingagadwanga.
I-SJG-2083CS kwi-Intanethi i-Acid Alkaline Concentration Meter
Isixhobo esidijithali esitsha esine-intanethi esikrelekrele esenziweyo sigubungela umlinganiso wokuqhutywa kunye nokuxinana kwezisombululo ezahlukeneyo ze-sodium chloride, i-hydrochloric acid, i-nitric acid, i-sodium hydroxide, kunye ne-dilute / concentrated sulfuric acid. Esi sixhobo sinxibelelana nomenzi woluvo nge-RS485 (ModbusRTU), eneempawu zonxibelelwano olukhawulezayo kunye nedatha echanekileyo. Gqibezela imisebenzi, ukusebenza ngokuzinzileyo, ukusebenza ngokulula, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukhuseleko kunye nokuthembeka zizibonelelo ezibalaseleyo zesi sixhobo.
Le mitha isebenzisa i-elektrode ye-acid ye-alkaline ehambelana ne-digital, enokusetyenziswa ngokubanzi ekuphetshweni kwamandla ombane, kwimizi-mveliso yamachiza, indlela yokutshintshiselana nge-ion ukuvelisa uxinzelelo lwamanzi olusulungekileyo kwisisombululo sokwenza ngokutsha, okanye esetyenziselwa ukumisela isisombululo se-boiler pickling, Ukulawula uxinzelelo lweetyuwa e-acid-alkaline kwisisombululo Ukubeka iliso ngokuqhubekayo.
I-MPG-6099 ye-Multi-parameter yokuHlaziya
I-MPG-6099 ye-wall-mounted multi-parameter MPG-6099, i-parameter sensor yokujonga umgangatho wamanzi, kubandakanya iqondo lobushushu / i-PH / ukuqhuba / ioksijini enyibilikileyo / i-turbidity / i-BOD / i-COD / i-ammonia nitrogen / nitrate / umbala / i-chloride / ubunzulu njl. . I-MPG-6099 multi-parameter isilawuli inomsebenzi wokugcina idatha, onokuthi ujonge amasimi: unikezelo lwamanzi lwesibini, i-aquaculture, ukubeka iliso kumgangatho wamanzi omlambo, kunye nokubeka esweni ukukhutshwa kwamanzi okusingqongileyo.
I-PF-2085 Ion Sensor ekwi-Intanethi
I-PF-2085 i-electrode edityanisiweyo ekwi-intanethi ene-chlorine ifilimu enye yekristale, i-PTFE i-interface yolwelo engamanzi kunye ne-electrolyte eqinileyo idityaniswa noxinzelelo, ungcoliseko lokulwa kunye nezinye izinto. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwizinto ze-semiconductor, izixhobo zamandla elanga, i-metallurgical industry, i-fluorine equkethe i-electroplating njl njl njl.